जहाँ छोड्यौ तिम्ले - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home Not-to-be-missed जहाँ छोड्यौ तिम्ले
काठमाडौं । केकी अधिकारी र गौरव पहाडी फिचर्ड ुजहाँ छोड्यौ तिम्लेु सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक गीतमा स्वर स्वरूपराज आचार्यको सुन्न सकिन्छ भने शब्द एस एस गणेश र संगीत दवान किनारको रहेको छ । गीतलाई संगीत संयोजन समेत संगीतकार किनारले नै गरेका हुन्। भिडियोमा केकी र गौरवको उत्कृष्ट अभिनय देख्न सकिन्छ । पशुपती म्युजिकले बजारमा ल्याएको भिडियोलाई निसान घिमिरे कस्यपले निर्देशन गरेका हुन् । उत्सब दाहालले छायांकन गरेका भिडीयोमा ज्वतीको मेकअप र सम्पादन निर्दशक कस्यपकै देख्न सकिन्छ ।
प्रदेश ३ रासस - December 1, 2020 0
प्रदेश ३ सविन शर्मा - December 1, 2020 0
पार्टीमा कोही महामहिम छैन : माधव नेपाल
Editor-Picks तुलसी भण्डारी - November 25, 2020 0
वीरगन्ज । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी ( नेकपा ) का बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टीमा कोही पनि महामहिम नभएको बताएका छन् । नेपाल निजामती...
बिरामी बोकेको भ्यान त्रिशूलीमा खस्दा तीन बेपत्ता
चितवन । प्युठानबाट बिरामी बोकेर काठमाडौँ जाँदै गरेको पिकअप भ्यान त्रिशूलीमा खस्दा तीन जना बेपत्ता भएका छन् । साथै एक जना घाइते भएका छन्...
Editor-Picks महेश्वर गौतम - November 25, 2020 0
भर्खरै सुभाष साह - November 28, 2020 0
चिउराको भरमा पोखराबाट बागलुङ हुँदै रोल्पासम्म
खेमराज गौतम - April 16, 2020 0
गलकोट । लकडाउन थपिँदै जान थालेपछि पोखरामा रोकिएर बसेका रोल्पाका सात मजदुर बागलुङ हुँदै गृहजिल्ला हिँडेका छन् । सोमबार बिहान चार बजे...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - September 18, 2020 0
चितवन । कोरोना सङ्क्रमण भई यहाँ उपचाररत दुई जनाको मृत्यु भएको छ । एक जनाको भरतपुर अस्पतालमा र अर्का एकको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारका...
विदेश एजेन्सी - October 27, 2020 0
नयाँदिल्ली । भारतमा कोरोनाभाइरसबाट दैनिक सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्या पछिल्लो तीन महिनामा मङ्गलबार सबैभन्दा थोरै देखिएका छन् । सरकारी अधिकारीहरुले दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो तीन महिनाभित्रमा मङ्गलबार...
बैतडीको खोड्पेमा बस दुर्घटना हुँदा ९ जनाको मृत्यु, ३४ घाइते
Breaking News सीपी लोहिया - November 13, 2020 0
बैतडी । बैतडीमा बस दुर्घटना हुँदा ९ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३४ जना घाइते भएका छन् । दार्चुलाको गन्नाबाट महेन्द्रनगरका लागि छुटेको पवनदुत...
Breaking News सुजीतकुमार झा - April 5, 2020 0
नेपाल प्रहरीका दुई डिआइजीलाई कोरोना संक्रमण
Breaking News राजधानी समाचारदाता - August 17, 2020 0
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्राविधिकतर्फका दुई जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । महाराजगन्जस्थित प्रहरी अस्पतालका दुई जना डिआइजीमा कोरोना...
खेल राजधानी समाचारदाता - July 30, 2020 0
प्रदेश ३ नारायण ढुङ्गाना/रासस - November 26, 2020 0
प्रमुख रासस - November 30, 2020 0
प्रदेश ३ दिनेश थापा - December 1, 2020 0